‘सबैको साझा प्रयास भएबाटै समृद्ध महानगर’ : वडाध्यक्ष, नारायण केसी - Nepal's No.1 News portal
(लामो समयसम्म कम्युनिष्ट राजनीतिमा होमिएका नारायण केसी प्रभावशाली संगठकका रुपमा परिचित छन् । केसी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर–४ का वडाध्यक्ष हुन् । विद्यार्थीकालदेखि नै जनताको सेवामा निरन्तर लागिरहने उनी सरल स्वाभावमा सबैसँग प्रस्तुत हुन रुचाउँछन् । नेतृत्वले प्रभावकारी रुपमा जनताको सेवामा लाग्न सके मुलुकको समृद्धि यात्रा टाढा नभएको उनको भनाई सँधैभरि सबैका लागि प्रिय छ । प्रस्तुत छ, वडाध्यक्ष केसीसँग साझामेलका लागि कुमार ओझा र देवराज प्रसाईले गरेको संवादः)
ललितपुर वडा नम्बर–४ मा विकास निर्माणका गतिविधि कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ?
–कर्मचारीबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि वडाको मुहार फेरिएको छ । विगत पचासौं वर्ष पाटीमा बसेको वडा अहिले आफ्नै भवनमा बसेर जनतालाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । स्थानीय जनतालाई सेवा दिने वडा आफैं समृद्ध भएको छ । यसका लागि सबै वडाबासीलाई धन्यावाद दिनुपर्छ । यो सबैको साझा प्रयासबाट नै सम्भव भएको हो ।
यो वडा ललितपुर जिल्लाको जावलाखेल क्षेत्र भएकाले पनि यहाँ विकास निर्माणले फड्को मार्नु स्वाभाविक पनि छ । हामीले सडक सुधार, ढलनिकासको व्यवस्थापन र खानेपानीको समाधान गरेका छौं । कतिपय काम गर्दा समन्वयको अभावमा रोकिएका हुन्छन् । तर, तिनीहरूलाई समाधान गरेका छौं ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु पूर्व र पछिको अवस्था के छ ?
–जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि वडाबासीलाई सेवा दिनेकुरामा धेरै फरक अनुभूति भएको छ । विगतमा चारकिल्ला, घरबाटो सिफारिस लगायतका काममा कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो पाइयो । तर, अहिले जनप्रतिनिधिले तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले वडाबासी सन्तुष्ट रहेको पाएको छु । कागज र प्रक्रिया पुगेर आएका कुनै पनि सेवाग्राहीका काम रोकिएका छैनन् । मैले स्वयं जनतालाई सबै किसिमका काम गर्न जाँदा प्रक्रिया बुझेर जान सुझाव दिने गरेको छु ।
जनप्रतिनिधिको रुपमा वडाका बासिन्दाको गुनासो कसरी सम्बोधन गर्दै आउनु भएको छ ?
–मेरो वडामा कुनै पनि नागरिकको गुनासो छैन । हुन त सबैको चित्त बुझाउन नसकिएला । तर, सकेसम्म सबैको जनप्रतिनिधिको रुपमा मैले आफूलाई उभ्याएको छु । मैले त भन्ने गरेको छु –मेरो काममा चित्त बुझेन भने मलाई भोटै नहाल्नुस् ।
पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा वडालाई विकास गर्ने विषयमा के–के काम भइरहेको छ ?
–यो वडा पर्यटकीय क्षेत्र नै भनेर होइन, यहाँ भएको एउटा ठूलो चिडियाखाना रहेकाले पनि महत्वपूर्ण छ । यसको भ्रमणका लागि देशको विभिन्न क्षेत्रबाट आउनेको संख्या उल्लेख्य रहन्छ । र, विदेशीहरू समेत आउने गर्दछन् । केही पाटीहरू छन् । पहिले राजाका पालामा काट्टो खाने पाटी भनेर चिनिएको पाटीको अवस्था भूइँचालोले जीर्ण बनाएको छ । यसको पुनर्निर्माणका लागि वडा कार्यालयले कार्यक्रम अघि सारेको छ । केही अनाधिकृत रुपमा पाटीमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाउने काम गर्न सकिएको अवस्था छैन । तर, वडाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हटाउने र पाटीपौवालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा आएपछि विकासका कार्यमा स्थानीयबासीसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ ?
–कतिपय कामको थालनी आफैबाट गर्नुपर्छ भनेर म स्वयं विकास निर्माण तथा अन्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने काममा अग्रसर हुने गरेको छु । जसले अरु व्यक्तिलाई समेत काम गर्ने प्रेरणा मिलोस् र कामप्रति जिम्मेवार बनुन् भन्ने मेरो अपेक्षा हो । धेरै कामहरू पहिला भएका थिए । र अब मर्मत सम्भारका कामहरूलाई निरन्तरता दिनु वडाको मुख्य काम हो । भित्रिबाटोमा भएका ढल, सडक मर्मत र खानेपानीका कामहरुको निरन्तरता वडाले दिनेछ । धुलो र धुँवाबाट वडालाई मुक्त राख्ने अभियान छ । यो बत्ती, टेलिफोन र केबुल लाइनलाई व्यवस्थित गर्न केही समस्या भइरहेको छ ।
वडामा कोरोना प्रकोपको अवस्था के छ ? वडाबासीलाई सचेत बनाउन कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
–कोरोना महामारीले यस वडालाई समेत प्रभावित बनाएको छ । हामीले आमनागरिकलाई सचेतता अपनाउन आह्वान गरेका छौं । टोलटोलमा सचेतनामुलक सन्देश लिएर प्रचार ग¥यौं । मास्क, सेनिटाइजर, पञ्जा लगायतका सामग्रीहरू वितरणको कार्य वडाबाट ग¥यौं । आमनागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्यको विषयमा सजग रहनुहोस् भन्ने सन्देश दियौं ।
लकडाउनको समयमा यस वडामा बसोबास गर्ने निम्न आय भएका नागरिक र दैनिक रोजगारीबाट जीविका चलाउनेहरूलाई राहत वितरण गर्ने जस्ता कार्य सञ्चालन ग¥यौं । कसैलाई पनि विभेद हुने परिस्थिति यस वडामा भएन । अन्य वडाको तुलनामा हाम्रो वडामा धेरै मानिस महामारीबाट सुरक्षित भएको मैले पाएको छु ।
वडा नम्बर–४ मा सहकारी क्षेत्रको भूमिका कस्तो छ ? समन्वय कसरी गर्नुभएको छ ?
–यस वडामा धेरै सहकारीहरू छैनन् । सहकारीसँग खासै समन्वय भएको पाएको छैन । कहिलेकाही साधारणसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेक अन्य काममा सहकार्य छैन । सहकारीको नियमन र उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा महानगरपालिकाको छुट्टै निकाय भएकाले वडाको भूमिका त्यति देखिँदैन । सहकारीले गरेका काम नराम्रा छैनन् । तर, सहकारीहरूले उत्पादनमुखी काममा लाग्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । केही–केही सहकारीले ऐन विपरीत पनि काम गरिरहेको पाएको छु, त्यस्ता सहकारीलाई सम्बन्धित निकायले नियमन गर्नु पर्दछ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।
वडालाई सुरक्षित बनाउन, शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
–विगतको तुलनामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो भएको पाएको छु । पहिला–पहिला केही टोले गुण्डा र कुलतमा लागेका युवाहरू टोलतिर भेटिन्थे । अहिले यस्तो अवस्था छैन । ४ नम्वर वडा शान्त छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि यही वडामा भएको हुनाले शान्ति सुरक्षाको स्थिति राम्रो भएको पाएको छु ।
संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय कसरी भइरहेको छ ?
–विकास निर्माणका काममा सबै तहका सरकारहरूको समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस क्षेत्रका सांसदहरूको सहयोग राम्ररी पाएको छु । सबैको सहकार्यमा मात्र वडा र महानगरको समृद्धि सम्भव छ ।